ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & အရာအားလုံးလုပ်ပါ! | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → ဟွန်ဒါ → Honda CBR 600RR 2009 C-ABS Top Speed 280km/h How To Make & Do Everything!
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & အရာအားလုံးလုပ်ပါ!
Zsotyesz87: မှတ်ချက်အရွက် na:: D
Jhon Camille Vergel: ဤအ QE မိတျဆှေအတွက်မိဘများ?
ငါ sertgent: so r6 won
Fr3shChriS13: ok ဈ ima တစ် Yamaha r6 get ထင်. 2006 forastart
vin steel: သန့်ရှင်းသောဘုရားမထင်မှတ်သောကျွန်မစက်ဘီးဒါမကောင်းတဲ့ချင်, ဤအမှုသည်ငါ့ကားကိုတစ်ဦးတင့်ကားများကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေသည်.
Leo motte: သင်တို့ကဲ့သို့ Mano မှခွေးမကနဂါးကိုကိုင်ထားနိုင် 280 လမ်း!!meu sonho
ဂျွန်မုန့်စိမ်း: bullshat 280 ကိုယ်သာ reacht နိုင် 240 🙁 im to tall and heavy catch to much wind lol
Gerry As roma: Honda သင်ပြုအသွင်အပြင်ပေးအပ်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်ကြောင့် GPS သို့မဟုတ်အလားတူနှင့်သင်၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ရန် 280 but in reality you are 40 kmh slower just to save the asses of those who like to go fast
VinsanityLPTL: ez most tényleg ennyi körül van, vagy sokat csal az óra? nem gondoltam h egy 600as tud 280at:: D
LilJapBoi: Really. Canada and U.S. rocks then. : D
Fisk51: ya maybe 😀 butafriend tested his on an event in germany he was taken by an police speed cam and was on 276 and his computer showed 283 so its notabig difference. but he gotabit more power cause complete akrapovic and kn air filter. အကွောငျး 130 hp
Paulo Pimenta: You’re right, but it’s not about just the KPH difference, it’s how you get there, ပြီးနောက် 2007 looked much faster. Independent of that, i like more the 2009 one. Cheers
haxxika: Ez melyik szakasz az m3ason?:: D
Tejfogu Norbi: Cause if you change 40 သို့ 41 rear, your RPM will be bigger, thats why your speedometer cheats up to 287
အစာရှောင်ခြင်းဓါတ်ငွေ့ Scooter စျေးပေါတဲ့ဓါတ်ငွေ့ Powered Scooter
Honda Shadow Spirit 750 ဆန်းစစ်ခြင်း
ဟွန်ဒါ CBR 600 RR C-ABS
ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Brammo Enertia ဟွန်ဒါ DN-01 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati 60 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Ducati Diavel ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Moto Guzzi 1000 Daytona Injection Bajaj Discover ဆူဇူကီး AN 650 Aprilia Mana 850 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1